Psychological chinokatyamadza unovhiringidza kuziva
Adrenaline - ndiwo mushonga remakore rechi21. Kana kuwana "dose" kushandisa kunyanyisa haisi nguva dzose zvinogoneka, zvino anouya kuzobatsira cinema. Nzira huru muka tsinga dzako - ichi mupfungwa chinokatyamadza. Mazita yakanakisisa anotyisa, vachiridza pfungwa, unogona kuwana pazasi.
Thriller, rakabudiswa muna 1960, achiri inoramba imwe nyika inotyisa mafirimu. Alfred Hitchcock nguva dzose rinotungamirirwa chaizvo zvakanakisisa mupfungwa chinokatyamadza, sezvo zvakaitika "Psycho". The mufananidzo rinotiudza nezvomumwe musikana Marion, uyo anofa mumaoko hunoenzana ari praia, apo paari uye chiito kunoitika. We muurayi mahwanda unhu mukati make "mhenyu" mai refu-akafa, iyo pave ose mhosva. Hwokufananidzira zvamarudzi Hitchcock kuti kupfura hamuzosiyi iwe hanya.
Vaya Vanoda mupfungwa chinokatyamadza firimu vanofanira zvechokwadi kuteerera firimu iri. Regan sick chinoshamisa chirwere-makore 12. Nguva nenguva inzwi kuchinja, pfari kuitika, vamwe asingazivikanwe simba mukati maro anokwanisa kufamba rinorema zvinhu. Vanachiremba havagoni kutsanangura zviri kuitika uye mazano amai kutendeukira kuna Regan exorcist. Munguva chapera, dhiabhori anouya uye kutanga kuita chinokatyamadza kwechokwadi. Psychological nzira yaishandiswa firimu, achaita kuti vadedere nokutya.
"Imba Wax" ( "Wax Museum")
Pane mifananidzo miviri pamwe chete zita. Zvisinei, anenge munhu wose vakatarisa vari vaviri, Zvinokurudzirwa kuti vasarudze kuti kwokutanga, 1953. On the Russian musoro firimu iri uyewo dzimwe nguva rinoshandurwa kuti "Wax Museum". Firimu inotiudza chiremba uyo pave nemamwe wakisi inofananidza vanhu vakakurumbira. Zvisinei, kuti miziyamu iyo rinoratidza basa rake haisi kunyanya kukurumbira. Nokukurumidza, pedyo pane imwe yakafanana Museum, zvakawanda sezvinoita kamuri kutya. Panguva iyoyo vari muguta kutanga kunyangarika vanhu. Zviitiko izvi kune mumwe? Vazhinji ano mupfungwa chinokatyamadza yakaenzana "Wax Museum" uye avo vatungamiriri funga firimu kapoka kane.
Mufananidzo uyu ndechimwe hanya nevaya kuonga mupfungwa chinokatyamadza. Kwete kunyange nokuti nyaya excites pfungwa, asiwo nokuti firimu akapfurwa zvakanakisa uye nyanzvi. In nyaya Laura, uyo akararama ake uduku mune nherera, makore gare gare, akadzoka ave nomurume wake uye makore manomwe mwanakomana okuberekwa. Family rudo kurarama muimba ino, asi nokukurumidza mukomana anotanga "kutamba" pamwe zvinoonekwa chete neshamwari naye. Gare gare, iye uye Laura anotanga kuona midzimu yavana uduku vavo, uye Chikurukuru, mukomana vakaremara vaitakura bhegi pamusoro musoro wake nokuda kuipa kwake. Migumisiro mhosva mwana uyu kutamba?
Chitendero Director Stenli Kubrik muna 1980 pave chimwe chezvinhu akakurumbira mabasa ake - ". Kupenya" kakawanda mufananidzo uyu akaita remakes, asi hapana vatungamiriri havasati kugona kurova chepakutanga. Firimu rinotitaurira pamusoro mhuri kutamira nguva yechando imwe hotera chinhu. Musoro wemhuri - munyori, iye anoronga kushanda pano yokufungidzira ake. Zvisinei, pashure kutamira vanotanga kuita zvinoshamisa angazvidederesa mhuri yake. Kana gamba kuchaunza nezveimwe mwedzi mishanu kusungwa?
Rinotyisa pamusoro vechidiki musango; mazita mafirimu, mazita nematsananguriro uye wongororo
Chakavanzika kubudirira Kelli Steybls
Soviet melodrama "Dzokaiwo mangwana." Vatambi uye mabasa
Kristin Bauer: Biography, Filmography, uye zvinonakidza zvinhu pamusoro mutambi
Actress Yelena Yakovleva: Filmography. Most Mumafirimu pamwe kukwikwidza Eleny Yakovlevoy
Biography Sergei Bezrukov - inobudirira mutambi wokuRussia yemitambo uye mabhaisikopo
"Tatra 815" - akaoma rori
Kutarisira bvudzi pashure puroteni kuswatura: maturusi, wongororo
Sei Itai Bun inoita kuti mukomana maoko ake; Plans uye vanorumbidza
Endometrial ukobvu 10 mm: zvazvinoreva
Transport uye nenzvimbo chinzvimbo Russia: features, zvayakanakira nezvayakaipira. Uye zvoupfumi uye chokufambisa-nenzvimbo chinzvimbo Russia
Shturmann Link 300: User manual, wongororo
Winchester Cathedral (vakasimuka): tsananguro, kudyara, kunyanya
Zvinotyisa kuti mashoko kuchengeteka
The muto nokuti zongzi sei kuti kodzero?
Ita bvudzi kuvesa pamusoro bvudzi pfupi
Hapana chikonzero chekufunga pamusoro pearimi kuti shoko iri rakabva pasikati